Abenzi base China MZF Magnetic Drive Pump kunye nabathengisi | Impompo yedamei kingmech
Ubukhulu: DN25 ~ DN400
Ubungakanani: ~ 2000m3 / h
Ubushushu: ngaphantsi kwama-250 ℃
Uxinzelelo: 2.5MPa ~ 10MPa
Isigaba esisodwa sokutsala, Ngaphezuluung isakhiwo
Impompo kazibuthe 2.MZF luhlobo lwempompo centrifugal ukuba akukho itywina shaft, ngokupheleleyo ngaphandle ukuvuza, kwaye iqhutywa coupling ngemagnethi, kwaye lilungu losapho oluqhutywa ngemagnethi.
3.Isebenzisa ukujikeleza kwangaphakathi okuphakathi ukuthambisa kunye nokupholisa ukuhlangana kwemagnethi kunye nokuhambisa ngokuhambisa. Ukujikeleza kwangaphakathi kubandakanya uxinzelelo oluphezulu lokujikeleza ngaphakathi kunye nokujikeleza koxinzelelo oluphantsi. Impompo yokujikeleza kwangaphakathi efanelekileyo ifanelekile kulungelelwaniso olulula ukuba lube ngumphunga, uxinzelelo olusezantsi lokujikeleza kwangaphakathi kwimpompo kufanelekile kulwimi olungekho eAsy ukulungiselela umphunga.
Iipompo zolwelo eziyingozi ziya kuxhotyiswa kabini Isiqulatho iqokobhe, Iya kuba yialam xa igobolondo lokuqala lesikhongozeli lilingiwe.
5.Ibhatyi yokufudumeza kunye nebhatyi epholisayo inokusetyenziswa ngokwemeko yokusebenza.
7.Ukusebenza, amandla ompu wamagnetic amandla ezilinganisweni ngokuzenzekelayo ngombane we-hydraulic, i-disc yokuthwala kuphela ukuthwala i-axial thrust xa impompo iqala kwaye imisa.
Impompo yeMagnetic inokukufeza oko ngaphandle kokuvuza, kufanelekile ukuhambisa inokubola, inetyhefu, inokutsha, iyadubula, iyabiza okanye ilwelo legesi elula. Ukongeza, impompo yemagneti ikwalungele ukuhambisa ubushushu obuphezulu, ulwelo lobushushu obuphantsi kunye nolwelo phantsi kwemeko yokucoca.
Egqithileyo I-API610VS6 Pump TDY Umzekelo
Okulandelayo: Impompo YAM Magnetic Driven